KDE စိတ်ကြိုက်သင်ခန်းစာ (Bespin + EyeCandy) | Linux မှ
KDE စိတ်ကြိုက်သင်ခန်းစာ (Bespin + EyeCandy)
x11tete11x | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်
ကောင်းပြီ၊ လူတွေဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးအလှူငွေပါ။ မူလနှင့်အသုံး ၀ င်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာမှမရှိပါဘူး။ Gnome Shell မှကြည့်ပြီး QT နှင့် KDE ကိုနှစ်သက်ပြီး GTK application တွေမှာ context menus များမဝံ့မရဲဖြစ်နေတယ်။ ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ရတာအရူးပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဟေးဒါကနည်းနည်းလေးရူးသွပ်တဲ့ xD ဖြစ်ခြင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု)
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ပိုပြီးပြောစရာမလိုဘဲ၊ ဒီမှာသွားသည် -
ရှင်းလင်းချက်၊ ကျွန်ုပ်သည် Kubuntu ၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာ Gentoo တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလွယ်ကူဆုံး distros တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မူကား Kubuntu တွင် ပို၍ လက်ခံမှုရှိရန်
အကယ်၍ ရုပ်ပုံများကို tab အသစ်များဖြင့်ဖွင့်ပါက၊ တစ်ခုခုကိုမမြင်ရလျှင်ပိုမိုကြီးမားသောမြင်ကွင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကပုံမှန် Kubuntu ဖြစ်သည်။
OSX အသုံးပြုသော Layout ကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့် panel ကိုရွှေ့မည်။
/ * bespin compile လုပ်ရန်လိုအပ်သောမှီခိုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သည်။ /
/ * အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုရယူပါ * /
/ * အရင်ကူးယူခဲ့သည့်လမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွှေ့ပြောင်းသွားသည်။ * /
/ * ရင်းမြစ်ကုဒ်ဖွဲ့စည်းပုံ * /
/ * ကျွန်ုပ်တို့သည်စုစည်းလမ်းညွှန်ထဲ ၀ င်ပြီး compile လုပ်ပြီး install လုပ်သည် * /
/ * Bespin ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အလှဆင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ *
ငါအခြေခံအဖြစ် LeoLike Simple V2 ယူပါလိမ့်မယ်
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြန်ထုတ်ယူပြီးပါက၎င်းကို bespin မှတင်ပို့သည် -
ငါခလုတ်များအကြားခွဲထုတ်ယူပါ (အကယ်၍ သင်သည်ဆက်တိုက်ခလုတ် ၂ ခုအကြားသီးခြားမျဉ်းကြောင်းဆွဲလိုလျှင်ဖြစ်စေ configure လုပ်နိုင်လျှင်)
tab ပြောင်းလဲမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ငါရိုးရာကိုပိုကြိုက်တယ်:
emboxded ​​(နစ်မြုပ်နေမယ့်အစား comboxes) ကိုမြှင့်တင်တာကြိုက်တယ်။
titlebar မှာအရောင်ချိန်ညှိချက်များ -
အိုး, ငါ amarok xD ticking လွဲချော်
ဒီ rounded edges တွေက <3 (ဒီဟာကိုတော့ gtk ကိုမုန်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါမလုပ်နိုင်လို့) ငါပြောတာ။
ယခု window ၏ border ကို configure လုပ်ရန်။
ကောင်းပြီအခုငါ Caledonia theme ကို install လုပ်မယ်။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး unzipped ပြီးတာနဲ့သင်ဤ folder ကိုရွှေ့ရမည်
ပြီးရင် task manager ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး global menu ကိုထည့်ပါ။
ရဲ့ icon တွေကိုသွားကြည့်ရအောင်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်၊ ဒါကငါ့အတွက်ပါ။ (ငါမကြာမီငါသေလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် distro haha ​​ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်):
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » KDE စိတ်ကြိုက်သင်ခန်းစာ (Bespin + EyeCandy)
ကောင်းပြီ ... လူတိုင်းကဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ဖူးတယ်။ မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Wooo၊ မင်းအတွက်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တာလဲ ဒါဟာငါ့ကိုအတော်လေးကောင်းသော Gnome 2-3 စေသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ဟဟားဟားထက်ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူပို့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းသောအလှူငွေ။
ဟားဟားဟုတ်တာပေါ့၊ မင်းအရင်ကတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာကငါ့ကိုအဆိုးရွားဆုံးကြောက်ရွံ့စေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ Bespin ကိုကြော်ငြာချင်တယ်၊ ဒါကအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းပါ။ ဒီလူတွေက KDE နဲ့ဘာတွေအောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဒီလူတွေနဲ့အတူမျှော်လင့်ပါတယ်။ နှင့် Bespin offers ကမ်းလှမ်းသောဖွဲ့စည်းမှုအဆင့်
ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ရှိသလောက် Chakra ၌စမ်းသပ်သည်။
အရမ်းအေးတယ်! မေးခွန်းတစ်ခုမှာ၊ သင်ဟာ Window Menu Bar လို့ခေါ်တဲ့ဂရပ်ဖစ် element တစ်ခုကိုသုံးပြီး panel နှင့် Mac နှင့် Ubuntu menus များလိုစတိုင်တစ်ခုကိုပေးသည်။
https://aur.archlinux.org/packages/kdeplasma-applets-menubar/ ဤအရာသည်ဖြစ်သော်လည်း Archlinux တွင် appmenu-gtk packages များသည်အမြဲတမ်းကျိုးပဲ့နေတတ်သည်။
Matthews က ဟုသူကပြောသည်
အဘယ်သို့သော distro သင်ပြောင်းလဲနှင့်အဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းများပါလိမ့်မယ်။ စာကောင်း
အာဂျင်တီးနားမှ Gentoo သို့ xD haha ​​သို့နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းနှင့်အကြောင်းရင်းများသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး distro haha ​​ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လက်ကိုရယူရန်အတွက်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အမြန်ဆုံး (သိသာထင်ရှားသောကြောင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသည့်အတိုင်းအတာကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် Gentoo မှဖြစ်သည်)၊ သူကငါ့ကို Gentoo မှာတုတ်တွေပို့ပြီးငါ haha ​​အရာအားလုံးကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်၊ ငါစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်တယ်။
အလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ kubuntu 12.04 ကိုပဲ install လုပ်လိုက်တယ်၊ ငါကငါဘယ်လောက်ကြိုက်လဲဆိုတာငါမြင်လိမ့်မယ်။
ငါ distros ၃၀ နီးပါးကြိုးစားခဲ့ပြီး Debian နဲ့ဘယ်တော့မှမဝေးတော့ဘူး။ Gentoo ကလုံးဝသဘောတူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတစ်ခုပါ။ အဲဒါကို virtualbox ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်ထည့်ပြီး disk ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုကိုစမ်းသပ်မှုစတင်တဲ့အခါ၊ အမြဲတမ်းပြတ်တောက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေပေမဲ့အရာအားလုံးကိုခြစ်ရာကနေ install လုပ်ဖို့ပိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံး Funtoo linux ပဲ၊ Debian Squeeze ကနေလုပ်တယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ partition ကတခြား linux ကိုဒီအတိုင်း install လုပ်ဖို့အမြဲတမ်းထားခဲ့တယ်၊ chroot ကိုနုတ်ထွက်လိုက်တယ်၊ restaw လုပ်စရာမလိုဘဲ Debian မှာလည်းရှိနေတယ်။ ယခုငါ mint နှင့် Debian Wheezy (kde) တို့နှင့်အတူရှိနေသည်။ အလွန်မြန်ပြီးတည်ငြိမ်သောကြောင့်ဤသင်ခန်းစာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အသုံးပြုနေသည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဖတ်နေပြီးတိုးတက်ခဲ့သည်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာကျွန်ုပ်သည်အခြား Debian ဖိုရမ်များတွင်မတွေ့ရသေးသောအသုံးပြုသူအသစ်များကိုကောင်းစွာဆက်ဆံသောအချက် မှလွဲ၍ တိုးတက်သောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ကျရင်ငါ Funtoo တစ်ခုတည်းရှိတဲ့စက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပေမယ့်သင်ယူစရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ အာဂျင်တီးနားမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။
haha ငါ funtoo ကိုကြည့်နေတယ်။ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ gentoo နဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအများကြီးမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ငါကပိုပြီးဝါရင့် xD ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။ အခုငါ bash xD scripts နဲ့ခွဲစိတ်မှုလုပ်နေတယ်။ Gentoo ကလဲအသုံးဝင်ပါတယ်၊ ငါ gentoo-update ရှိတယ် (အခြေခံအားဖြင့် concatenates ပေါ်ထွက်လာခြင်း၊ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ပေါ်ထွက်လာမည့်စာကြောင်းများ) VMware start \_ stop သည် vmware daemon သို့မဟုတ် xD အတွက်ပေါ်ပေါက်စေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ထုတ်လုပ်သောအချို့သည်မှတ်စုစာအုပ်အား charger နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၎င်းသည်ဗီဒီယိုကဒ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြင့်သတိပေးပါ။ ၎င်းသည်ဘက်ထရီအသုံးချသည့်အခါ၎င်းကိုစွမ်းအင်ချွေတာခြင်းသို့ထည့်ပြီး bash xD ကိုကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းကိုလည်းသတိပေးပါသည်။ ပုံကြီးများကို နှိပ်၍ ခဏခဏ နှိပ်၍ ပိုကြီးလာသည်ကိုတောင်းပန်ပါသည်။ v
သငျသညျသူတို့အား gentoo-update ကို script များအချို့ကို PASTE ၌ထည့်နိုင်, make.conf အတွက်အလံများငါ့ကိုအများဆုံးကုန်ကျပေမယ့်နည်းနည်းအားဖြင့်ငါငါ့ system ကိုအဘို့အလိုချင်သည်အဘယ်အရာကိုငါသိ၏အဖြစ်သူ၏လက်ကိုယူ။ , gentoo / funtoo နဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။
သူတို့ဟာမင်းကိုအစေခံနိုင်လိမ့်မယ်၊ ငါ၌ရှိသည်သော CFLAGS သည်အတန်ငယ်ထူးခြားသည်၊ ငါ graphite ကိုအသုံးပြုနေသဖြင့်သံသရာ၏အရှိန်ကိုတိုးမြှင့်ရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည့်နည်းပညာဖြစ်သည်။ ငါကနောက်ဆုံးပေါ် GCC (ပုံမှန်အားဖြင့်ကြွလာတော်မူသောငါ့ပရိုဆက်ဆာ၏အလံကောင်းစွာအသိအမှတ်မပြုပါဘူးကတည်းက) နှင့် grafite နှင့်အတူထည့်သွင်း, မြန်နှုန်းအထင်ကြီးစရာပါပဲ။
x11tete11x ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားငါ့ကိုအများကြီးကူညီမယ်။ packageuse မှာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်၊ ဂရပ်ဖိုက်ကငါ့အတွက်အသစ်ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအကြောင်းဖတ်မယ်ငါအရမ်းအဆင့်မြင့်တယ်လို့ထင်တယ် MAKEOPTS = » - j9″ + graphite ငါ xD အလုပ်လုပ်သောအရာကိုမသိချင်ပါ။ လေးစားပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ ငါပြproblemsနာမရှိဘဲထည့်သွင်းခဲ့တယ် ... ပုံရိပ်တွေကို G + ထဲမှာချိတ်ထားတယ်
ဟီ, ငါရိုးရှင်းသော leo ဆောင်ပုဒ်ကိုဘယ်လို download လုပ်ပါ? : /
ရာဖေးလ် Ochoa ဟုသူကပြောသည်
* source code ကိုကူးယူပါသည်။
svn ပူးတွဲ https://cloudcity.svn.sourceforge.net/svnroot/cloudcity
အလုပ်လုပ်သော "cloudcity" မိတ္တူကိုသော့ခတ်ထားသည်
svn: သော့များကိုဖယ်ရှားရန် "svn cleanup" ကို run ပါ
ဒါပေမယ့်ကိုယ့် svn အကူအညီကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကျွန်မနားမလည်ဘူး
Rafael Ochoa အားပြန်ပြောပါ
WhatsApp သည်ယခု iPhone တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်